Ifakwe entliziyweni yeTuscany amanyathelo ambalwa ukusuka kwindawo yokuhlala yaseMedice yasePoggio eCaiano kwaye isondele kuzo zonke iinkonzo, indlu enkulu ye-100 yeemitha ezikwere zemitha efakwe ngokupheleleyo kwisitayile sale mihla, inikezela ngesisombululo esifanelekileyo kwishishini kunye nokuhlala ngokuzilibazisa.
Le ndlu inendawo enkulu evulekileyo enekhitshi, indawo yokutyela kunye negumbi lokuhlala elinebhedi yesofa, igumbi lokulala eliphindwe kabini, igumbi lokulala elinamagumbi amathathu kunye negumbi lokuhlambela elineshawa kunye nebhafu, ukubanakho ukongeza ibhedi enye eyongezelelweyo.
4.90 ·Izimvo eziyi-93
4.90 · Izimvo eziyi-93
Sihamba imizuzu embalwa ukusuka kwiindawo zokutyela, iipizza, iivenkile ezinkulu, iibhari, iikhemesti, abalungisi beenwele, iimpahla kunye nesikhululo sebhasi, kwabo bafika kuthi ngemoto kuya kuba lula ukupaka kufutshane nendlu. I-villa ye-Medici yasePoggio a Caiano kunye neegadi zayo ezinokutyelelwa simahla ziimitha ezingama-400 ukusuka kwigumbi.
Amo viaggiare e fortunatamente ho avuto la possibilità di farlo quindi so quanto sia importante la sensazione di essere i benvenuti per apprezzare appieno il viaggio.Buon soggiorno!
Siyafumaneka kwiindwendwe zethu ngayo nayiphi na imfuno, sinokubanceda ekukhetheni iindawo zokutyela, iindlela zothutho, ugcino-ndawo kunye nokulungelelanisa kakuhle ukuhlala kwabo kokubili ukuzonwabisa kunye nomsebenzi.